Wholesale FEELM Inopenya paPasirose Yakakura Vape Expo Munguva yeCOVID-19 fekitori uye vagadziri | SMOORE
FEELM Inopenya paPasi Yakakura Kupfuura Vape Expo Munguva yeCOVID-19
Gore ra2020 zvirokwazvo harina kujairika, nekuda kwekupararira kwedenda re COVID-19. Mushure mekuratidzwa kwakawanda kwevepasi rose kwadzimwa, zvine rombo rakanaka kuti yepasirese, 2020 IECIE Shenzhen E-Cig Expo, inokwanisa kuitiswa zvinobudirira munaAgasti 20-22. Chiratidziro chemazuva matatu chakwezva mabhizimusi e2,536 nevape uye vashanyi 54,809, izvo zviri kupfuura zvinotarisirwa.
Zvakare, FEELM yakwevera kutarisisa kukuru. WeChat data chikuva inoratidza kuti huwandu hwevateveri veFEELM inowedzera neinenge chiuru nemazana mashanu. Kubata 180-metres-mita dumba, FEELM inopa ruzivo rwehunyanzvi hwehunyanzvi pamwe nezviitiko zvekushanya zvinofadza.
Pakutanga kwa2020, FEELM yakatanga iyo yakagadziridzwa pod mhinduro. Ne kugadzirwa kwemhute kuri kuwedzera 44.53%, inoendesa kunhuhwirira kwekuwedzera; nicotine dhirivhari inokwenenzvera ichiwedzera 87.58%, inounza kugutsikana kukuru, uye mwero wekudonha unodzikira zvakanyanya 98%, inopa chiitiko chiri nani kwazvo. Kufananidza neruzivo rwemaindasitiri dhizaini, akawanda ezvigadzirwa zvitsva anounzwa uye ari kutaurwa zvakanyanya pamusoro.
Kunze kwehunyanzvi hwehunyanzvi uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, FEELM zvakare inoedza kupa chinonakidza chiitiko chekushanya. Nzvimbo yemutambo yakagadzwa, uye matani ezvipo zvinonakidza zvakapihwa; anokwezva bartender akakokwa uye anopa akasiyana siyana emabikoji. Chikwata chevanoyevedza vatambi vanoita katatu pazuva, vachikwezva vazhinji vashanyi. Mamiriro ekunze eFEELM dumba anogara achivaraidza uye kufadza!
Kufamba uchitenderera paIECIE, iyo "FEELM mukati" chiratidzo chinosvetukira mumaziso ako kazhinji. Vatanhatu vevatinoshanda navo, vanoti MOTI, YOOZ, Xander, VFOLK, Vango, uye Vibe, vanopinda kuratidzwa uye unogona kubata zviri nyore "FEELM mukati" pane avo maposta, mavhidhiyo, uye zvekushambadzira zvinhu. Pasi rese, isu tine makumi maviri evanoshanda navo, kubatsira vanhu vakuru vanoputa kuti vaende kune hupenyu huri nani.
Vape Kurambidzwa muUnited States uye Kwakakomberedza ...
Vaping Mitero muUnited States uye Aro ...
India: Vapers Vacharatidzira Kurambidza paGunyana 1 ...
Teen Vaping Yakaramba 29% mu2020, CDC Sur ...
Kusvuta Imwe nzira, E Liquid Vapor Midzanga, E Midzanga Blister Pack, Epen, Midzanga Yekupisa, Newport E Midzanga,